Fri, Mar 22, 2019 | 11:45:40 NST
वर्षे तरकारीको लागि नर्सरी राख्न कृषि विज्ञको सल्लाह
काठमाडौं, माघ ९ – वर्षे तरकारीको लागि नर्सरी राख्न कृषि विज्ञले सल्लाह दिएका छन् । फागुनमा लगाइने गेलभेँडा, भन्टा, भेँडे खुर्सानी, पिरो खुर्सानी तथा काँक्रा, फर्सी, घिरौँला, चिचिण्डा लगायत सबै लहरेबालीको लागि अहिले नर्सरी राख्ने उपयुक्त समय हो ।
जाँगरिला किसानः गहुँ छोडेर क्यामोमाइल
माधव दुलाल/ उज्यालो । बाँके, माघ ७ – राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जनावरले खेतबारीमा लगाएको अन्नवाली नष्ट गरेर सताउन थालेपछि बाँकेको महादेवपुरी गाविसको ढकेरी गाउँका किसानले बाँदर र बदेल धपाउने नयाँ जुक्ति निकालेका छन् । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने बाँदर र बदेलले अन्नवाली खाएर हैरान पारेपछि किसानले नयाँ जुक्ति सोचेका हुन् ।
साँखु अब प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्र
काठमाडौं, माघ ७ – धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल काठमाडौंको साँखुलाई प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान शुरु भएको छ । साँखु शालिनदी मेलामा हजारौं तीर्थयात्री र पर्यटक पुग्ने र जथाभावी प्लाष्टिक फ्याँक्ने प्रवृत्तिका कारण हुने वातावरण प्रदुषण रोक्न अभियान थालिएको हो ।
कृषि विकास बैंक ४५ औँ वर्षमा
काठमाडौं, माघ ७ – कृषि विकास बैंक शनिबारदेखि ४५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ विक्रम सम्बत २०२४ सालमा स्थापना गरिएको अर्धसरकारी स्वामित्वको यो बैंक सबैभन्दा बढी चुक्तापुँजी रहेको वाणिज्य बैंक हो ।
पाकेको फर्सीको माग बढ्दो, अनुसन्धान र विकासमा सरकारी बेवास्ता
काठमाडौं, माघ ७ – जाडोयाममा पाकेको फर्सीको माग धेरै हुने भएपनि यसको विकास र अनुसन्धानको लागि सरकारी निकायबाट कुनै पहल भएको छैन । परम्परागत ढंगबाट स्थानीयस्तरबाटै हुने उत्पादनले माग धान्ने गरेको छ ।
जाडोमा महको सेवन अमृत बराबर
काठमाडौं, माघ ४ — जाडोमा कसरी जोगिने भनेर तपाई उपाय सोच्दै हुनुहुन्छ भने खानपानमा उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । तपाईँ के खानुहुन्छ भन्ने कुराले पनि चिसोबाट बँच्न सकिने नसकिने निर्धारण गर्छ ।
व्यवसायीक फूलखेती बढ्यो
काठमाडौं, माघ ३- यो बर्ष नेपालमा व्यवसायिक फूलखेती फस्टाएको छ । फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालले तयार गरेको प्रारम्भिक अभिलेख अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने फूलको निर्यात बढेको देखिएको छ ।
लमजुङमा सुन्तलाको उत्पादन घट्यो
आश गुरुङ/ उज्यालो । लमजुङ, माघ १ – उपयुक्त माटो र हावापानी हुँदाहुँदै पनि लमजुङमा केही वर्षयता सुन्तलाको उत्पादन घट्दै गएको छ । सुन्तला उत्पादनमा नेपालभर ख्याति कमाएको लमजुङमा सुन्तलाको बोटमा टुप्पो मर्ने रोग (सिट्रस ग्रिनिङ्ग)का कारण सुन्तलाका बोट मर्न थालेपछि उत्पादनमा पनि ह्रास आउन थालेको हो ।
तरुल, सखरखण्डको खेती बढ्यो
काठमाडौं, माघ १- माघे संक्रान्तिमा धेरै माग हुने तरुल, पिंडालु, सखरखण्ड जस्ता कन्दमूलको खेती बिस्तार हुन थालेको छ । केही वर्षअघिसम्म कन्दमूलको लागि भारतको भर पर्नुपर्ने वाध्यता भएपनि अहिले स्वदेशी उत्पादनले नै माग धानिरहेको व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
सात हिमाली जिल्लामा ‘स्याउमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ शुरु
हुम्ला, पुष ३० – फलफुल विकास निर्देशनालयले स्याउको व्यवसायिक उत्पादन गरिने सात हिमाली जिल्लामा स्याउमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम शुरु गरेको छ । निर्देशनालयले कर्णाली अञ्चलका पाँच वटा जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट र मनाङ्ग तथा मुस्ताङ्गमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।
काठमाडौंमा यो बर्षकै सवैभन्दा धेरै चिसो
काठमाडौं, पुष ३०- काठमाडौंमा आज यसवर्षकै सबैभन्दा धेरै चिसो महसुस गरिएको छ । बिहान साढे ६ बजेको तापक्रम शुन्य दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय कृषि गणनाको तयारी सम्पन्न, गणना माघ २ बाट
काठमाडौं, पुष २९ – राष्ट्रिय कृषि गणनाको सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको जनाएको छ । माघ १ गतेदेखि कृषि गणना गरिने भनिएपनि माघेसंक्रान्तिले असर पुग्ने बताउँदै गणनाको काम माघ २ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक प्रवोध सागर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
पद यात्रामा जाने आप्पाको टोलीको विदाई
काठमाण्डौं, पुष २८ - २१ पटकसम्म सगरमाथा आरोहण गरेका प्रख्यात आरोही आप्पा शेर्पा सहितको टोलीले पर्वतीय यात्रा गर्ने भएको छ । टोलीलाई राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवले राष्ट्रिय झण्डा दिएर शुभकामना सहित विदाई गर्नुभयो ।
तरकारी बेचेर मासिक एक लाख आम्दानी
प्रेमनारायण आचार्य/ उज्यालो । अर्घाखाँची, पुष २८ – देशमा रोजगारीको अवसर नभएको भन्दै युवाहरु विदेश पलायन भैरहेका बेला अर्घाखाँचीका एक जना किसानले तरकारी बेचेर मासिक एक लाख रुपैँया भन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । जिल्लाको अर्घास्थित घोंचेखोलामा व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गरेका गणेश वन्जाडे तरकारी बेचेर मासिक एक लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्नुभएको हो ।
तरुल, सखरखण्ड बिकेनन्
काठमाडौं, पुष २८- माग भन्दा धेरै भित्रिएपछि काठमाडौंको मुख्य तरकारी बजारमा तरुल, सखरखण्ड र पिंडालुको बिक्रि कम भएको छ । पोहोरको तुलनामा डेढ गुणा बढी आएपनि किसानले भाउ भनें घटाएका छैनन् । त्यसैले भाउ घट्ने अपेक्षामा उपभोक्ताले तरुल, सखरखण्ड किनेका छैनन् । यसवर्ष तरुल सबैभन्दा धेरै भित्रिएको छ ।
च्याउ खेतीमा बढ्यो आकर्षणः कम लगानी, मनग्गे आम्दानी
एलबी थापा/ उज्यालो । प्यूठान, पुष २७ – दिउसो विद्यालयमा पढाउने प्यूठान दाखाक्वाडीकी सीता रिजाल विद्यालयबाट फर्किएपछि च्याउसँग रमाउनुहुन्छ । साँझ बिहानको समयको सदुपयोग गरेर फलाइएको च्याउबाट उहाँले मासिक रुपमा नियमित छुट्टै सातआठ हजार कमाई समेत गर्नुभएको छ ।
माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै तिलको भाउ बढ्यो
काठमाडौं, पुष २७- माघे संक्रान्ति नजिकिँदै गर्दा अरु जस्तै तिलको माग पनि बढेको छ । मागसँगै भाउ पनि बढेको व्यापारीहरुले बताएका छन् । अहिले बजारमा तिलको मूल्य किलोको एकसय ६० देखि दुईसय रुपैंयासम्म पर्छ । बजारमा आउने धेरै तिल बिदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बताउनुभयो । देशभित्रै तिल खेतीको सम्भावना धेरै भएपनि माग अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । आवश्यक स्रोत साधनको अभावमा यसबारे अनुसन्धान पनि राम्रो हुन नसकेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ...
घाँसमा ध्यान दिन कृषि बिज्ञको सुझाव
काठमाडौं, पुष २६- हिउँदको यो समयमा चरन तथा घाँस अभाव हुने भएकाले पशु चौपायाको विशेष ध्यान दिन कृषि विज्ञले आग्रह गरेका छन् । मध्य पहाड र तराई क्षेत्रका केही किसानले जै, भेंच, बर्सिम जस्ता घाँसको जोहो गरेपनि धेरै ठाउँमा भने हिउँदको बेला पशु चौपायालाई नलपराल तथा खोस्टा दिने गरिन्छ । मध्यपहाडी क्षेत्रका किसानले डाले घाँसको व्यवस्था गरेपनि यो पर्याप्त हुँदैन । हरियो घाँस पर्याप्त खान नपाउने भएकाले हिउँदमा पशुचौपाया दुब्ला र ख्याउटे हुने गर्छन् भने दूध उत्पादन पनि कम हुन्छ । व्यवसायिक रुपमा पशुपालन...
देशैभरी चिसो बढ्यो
काठमाडौं, पुष २६- हिजोदेखि मौसममा एक्कासी आएको परिवर्तनले देशैभर चिसो बढेको छ । हिमपातको कारण उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको जनजीवन झनै कष्टकर बनेको छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा हिमपातका कारण सडक अवरुद्ध बनाएको छ । आज पनि देशैभर मौसम बदली हुने र पश्चिमी क्षेत्रमा वर्षा तथा हिमपात हुने मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका मौसमविद विद्यारत्न शाक्यका अनुसार मौसममा विस्तारै सुधार भएपनि अर्को हप्ता फेरि यसैगरी बदली हुने सम्भावना छ । पश्चिमी वायुको प्रभावले देशैभरको मौस...
तरकारी बेचेरै मनग्गे आम्दानी
भावुक योगी/ उज्यालो । बर्दिया, पुष २० – बर्दियाको गुलरिया क्षेत्रका कृषकहरुले तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन । थोरै लगानीबाट तरकारी उत्पादन गरेर राम्रो बजार भाउ पाएपछि किसानहरु हर्षित बनेका छन् ।
मौसममा सुधार आउँदै
काठमाडौं, पुष २०- हप्ताको शुरुबाट मौसममा आएको परिवर्तन विस्तारै सुधारको क्रममा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । काठमाडौं लगायत देशको उच्च पहाडि र हिमाली क्षेत्र बाहेक तराईको मौसम तुलनात्मक रुपमा खुलेको छ ।
कागतीको उत्पादन बढाउने सरकारी योजना
काठमाडौं, पुष २०- कागतीको खेती बिस्तार गर्न सरकारले तेह्रथुम, भोजपुर र धनकुटामा शुरु गरेको कागती मिसन कार्यक्रमलाई अरु जिल्लामा पनि विस्तार गर्न थालेको छ । फलफूल विकास निर्देशनालय कीर्तिपुरका अनुसार हरेक वर्ष कागती खेती हुने क्षेत्र र उत्पादन बढ्दै गएपनि यसले बढ्दो माग धान्न सकेको छैन । पकेट क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्देशनालयको सोच छ । स्वदेशको उत्पादनले नधान्दा अहिले पनि ९० प्रतिशत भन्दा धेरै कागती भारतबाटै आयात हुने गरिएको व्यापारीहरुले बताएका छन् । कागतीको लागि मध्य पहाडी क...
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने षडयन्त्र गर्‍यो : गौतम
काठमाण्डौं, पुष ५ - नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बामदेब गौतमले दोहोरो कर अन्त्यको नाममा सरकारले कृषि सेवा शुल्क हटाएर नेपालको कृषि क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका किसान सम्बद्ध संगठनको सहभागितामा गठन भएको राष्ट्रिय किसान सञ्जालले काठमाण्डौंमा गरेको कार्यक्रममा गौतमले भारतमा ७५ प्रतिशत अनुदान पाएको कृषि उत्पादन निर्वाध नेपाल भित्राउने हो भने नेपालमा केही पनि उत्पादन नहुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन सम्पन्नः क्योटो अभिसन्धिको म्याद ६ वर्ष थपियो
मंसिर २५ – क्योटो अभिसन्धीको दोश्रो प्रतिवद्धतामा सहमति जनाउँदै दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा चलिरहेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । अभिसन्धिलाई सन् २०१७ सम्म लम्ब्याउने तथा सन् २०२० बाट लागु हुने गरी नयाँ जलवायु सम्झौता गर्ने सहमति गर्दै सम्मेलन सकिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
डर्बान सम्मेलनमा अमेरिका, चीन र भारतमाथि दबाब
मंसिर २३ – दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा चलिरहेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा अमेरिका, चीन र भारतमाथि दबाब बढेको छ । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नयाँ सम्झौताको विपक्षमा रहेका यी देशमाथि आफ्नो अडान खुकुलो पार्न अरु देशले दबाब दिएका हुन् ।
बाख्रा पालेर बार्षिक दुई लाख आम्दानी
प्रेमनारायण आचार्य/ उज्यालो । अर्घाखाँची, मंसिर १२ — अर्घाखाँचीका जाँगरिला किसान यतिबेला बाख्राको स्याहारसुसारमा ब्यस्त छन् । थौरे मेहनत र कम लगानीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरु बाख्रा पालन तर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
धान उत्पादनम ११ प्रतिशतले बढ्यो
दिल शिरीष/ उज्यालो । बागलुङ, मंसिर १२— बागलुङमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ११ प्रतिशतले धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा यो वर्ष १ हजार ३ सय ३५ मेट्रिक टनले धान उत्पादनमा बृद्धि भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।
सिंचाइ मन्त्रीको निर्देशनमा योजना अन्यन्त्र सारिएपछि किसानहरु आन्दोलित
बुटवल, मंसिर ९ — सरकारले आर्थिक बर्ष २०६८०६९ को बजेटमा डिप ट्युवेल जडानका लागि स्वीकृत गरेको योजना सिंचाइ मन्त्रीको निर्देशनमा संसोधन गरि स्थानान्तरण गरेको बिरोधमा किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बजेटले स्वीकृत गरेको आयोजना सिंचाइ मन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवको निर्देशनमा अन्यत्र सार्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
जाँगरिला किसानः परम्परागत खेती छोडेर कफी उत्पादन तर्फ
प्रेमनारायण आचार्य/ उज्यालो । अर्घाखाँची, मंसिर ८ — अर्घाखाँचीका कृषकहरु कफी खेती तर्फ आकर्षित भएका छन् । अन्य परम्परागत खेती भन्दा सजिलो र धेरै आम्दानी गर्न सफल भए पछि कृषकहरु कफी खेती तर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
नयाँ जातको अदुवा?
काठमाण्डौ, मंसिर ६ प्रमुख नगदेबाली अदुवाको उत्पादन बढाउनको लागि नयाँ जातको अध्ययन र परीक्षण चलिरहेको छ । रोग कीरा नलाग्ने जातको खोजी भैरहेको अदुवाबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जनाएको छ । अहिले जेड आई ८५ ०२, जेड आई ८५ ०४, जेड आई ९७ २९ लगायतका नयाँ जातको परीक्षण भैरहेको कार्यक्रमका संयोजक रोशन बस्नेतले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उन्नत जातको बीऊ छिटै सिफारिस हुने क्रममा छ ।
जाँगरिला कृषकका कुराः १०-१२ हजारका लागि बिदेश किन जाने ?
प्रेमनारायण आचार्य/ उज्यालो । अर्घाखाँची, मंसिर ३ - अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्क बाट करिब ६ कोष टाढा रहेको पणेना गाविसका कृषकले गाईपालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् । रोजगारीको खोजीमा हरेक दिन एक हजार भन्दा बढी युवा बिदेश पलायन भैरहेका बेला व्यवस्थित रुपमा गाई पालेर स्वदेशमै कमाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पणेनाका उत्साही युवाले पेश गरेका छन् ।
आज कफी दिवस
काठमाडौं, मंसिर १ — कफीको उत्पादन र प्रयोगलाई बढाउने उदेश्य सहित बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम गरी कफी दिवस मनाइँदैछ । नगदेबाली कफी उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
सुन्तलाको उत्पादन घट्यो
काठमाडौं, कात्तिक ३० — यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन कम भएको छ । उत्पादन कम भएकाले सुन्तला बजारमा पनि कम मात्रै भित्रिएको व्यापारीहरुले बताएका छन् । भारतबाट सुन्तलाको आयात हुने भएपनि तिनमा गुणस्तर नहुने भएकाले धेरैले स्वदेशी उत्पादन नै खोज्ने व्यापारीहरु बताउँछन् ।
सरकारद्वारा रासायनिक मलको मुल्य बढाउने तयारी
सुनसरी (इनरुवा), कात्तिक २७ — रासायनिक मलको अभाव कम गर्न सरकारले रासायनिक मलको मुल्य बढाउने तयारी गरेको छ । सुनसरीको इनरुवामा आइतबार पत्रकारसँग कुरा गर्दे मन्त्री दत्तले कृषि तथा सहकारी मन्त्री नन्दनकुमार दत्तले रासायनिक मलको अभाव कम गर्ने बैकल्पिक बाटो नभएकाले मुल्य बढाउनु परेको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विकासोन्मुख देशहरुको सम्मेलन बंगलादेशमा
कात्तिक २७ — जलवायु परिवर्तनको जोखिमका विषयमा विकासोन्मुख देशहरुको सम्मेलन बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा सुरु हुँदैछ । आइतबार देखि सुरु हुने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा रहेका राष्ट्रहरुको संगठन सिभिएफमा आवद्ध ३२ देशका प्रतिनिधी, वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन् ।
काठमाडौं, कात्तिक २६ — काठमाडौंको बजारमा केही समयदेखि महङ्गिएको हरियो तरकारीको भाउ घट्न थालेको छ । चितवन, मकवानपुर, धादिङ लगायतका जिल्लामा तरकारीको नयाँ उत्पादन भएपछि भाउ बिस्तारै घट्दै गएको हो ।
किसानलाई कृषि विज्ञको सुझावः ‘गहुँ छर्न ढिला नगर्नुस्’
काठमाडौं, कात्तिक २० — गहुँ छर्न ढिलो नगर्न कृषि विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । पहाडी क्षेत्रका धेरै ठाउँमा गहुँ छर्ने काम शुरु भैसको छ । कतिपय ठाउँमा छर्ने तयारी हुँदैछ । मंसिर १५ भन्दा ढिलो भए उत्पादन राम्रो नहुने भएकाले सकेसम्म छिटो गहुँ छर्नुपर्ने कृषि विज्ञको सल्लाह छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गाईभैंसी ल्याउनेबारे प्रस्ताव नगरिएको खुलासा
काठमाडौं, कात्तिक १९ — प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेला गाईभैंसी ल्याउनेबारे प्रस्ताव नगरिएको थाहा भएको छ । भ्रमणको बेला भारतबाट १० हजार गाईभैंसी ल्याउने प्रस्ताव तयार भएपनि यस विषयले प्राथमिकता नपाएको स्रोतको भनाई छ ।
देशभरका किसानलाई धान थन्क्याउने चटारो
काठमाडौं, कात्तिक १३ — देशभरका किसान धान थन्क्याउने काममा व्यस्त छन् । तिहार सकिए लगत्तै पहाडी क्षेत्रका किसानको व्यस्तता बढेको छ । काठमाडौं उपत्यका सहित पहाडी क्षेत्रमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी धान भित्र्याईसकिएको छ । तराईमा पनि धान थन्क्याउने काम शुरु भैसकेको छ ।
असिना पानीका कारण स्याङ्जामा २५ लाख बराबरको क्षति
स्याङ्जा, कात्तिक ९ — बुधबार दिउँसो परेको असिना पानीका कारण स्याङ्जामा २५ लाख बराबरको क्षति भएको छ । असिना पानीले स्याङ्जाको आरुखर्क, भाटखोला र फेदिखोलामा झण्डै चारसय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाईएको धानबाली र तरकारी खेतिमा क्षति पुर्याएको हो ।